Abesifazane abampofu bathenge i-ambulensi yabo | Scrolla Izindaba
Abesifazane abampofu bathenge i-ambulensi yabo
Wenza njani uma uhulumeni wakho engakwenzeli lutho?
Abesifazane emphakathini ohlwempu e-Nigeria bakhiphe imali yabo encane behlanganisa ukuze bathenge “i-ambulensi” ebidingeka kakhulu emphakathini.
Laba besifazane, abavela emphakathini wase-Baddo e-Jigawa eNyakatho ne-Nigeria, ngamunye banikele ngo-1 000 Naira (ama-R45) izinyanga ezimbili ukuthenga i-VW Golf.
E-Baddo, umphakathi ohlupheka ngokweqile, ophakathi nendawo futhi okude nesibhedlela.
I-ambulensi iyadingeka ukuhambisa abesifazane ababelethayo beye esikhungweni sezokwelapha lapho bezobeletha khona.
Abesifazane abaningi kusobala ukuthi bebe shona ngesikhathi sokubeletha futhi nezingane zabo bezingaphili ngoba omama bebehluleka ukufika esibhedlela ngesikhathi.
Umholi womphakathi uHanne Hassan uthe yize abesifazane bezidelile bathenga imoto ezoba i-ambulensi, uhulumeni wezwe akazange abe wusizo.
“Izikhulu zomgwaqo zimisa imoto, zidale ukubambezeleka, kanti lokho sekuholele ekutheni kushone owesifazane oyedwa,” kusho uHassan.